600 Daawo Sawiro:Gaalkacaya Oo Caawa La isku Arkay Sanad Guuradii 22 ee Puntland, | khaatumo news online
Daawo Sawiro:Gaalkacaya Oo Caawa La isku Arkay Sanad Guuradii 22 ee Puntland,
Aug 1, 2020 - 4 Aragtiyood
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hadda ka qeybgalaya Xafladda lagu xusaya sanad-guurada 22-aad ee Aasaaskii Dowladda Puntland, oo taariikhda markii ugu horeysay caawa lagu qabtay Gaalkacyo.
Maamulka Puntland ee Soomaaliyeed ayaa la asaasay 1998-dii, Waxaana 22kii sano ee nidaamka Dowladnimo dhisnaa uu dadka reer Puntland gaarsiiyey barwaaqo iyo horumar, Soomaaliyana waa u sal iyo tiir waana meeshii laga baadi doonay dib u yagleelka Soomaaliya burburkii kadib.
Hambalyo ayaanu leenahay Puntland waayo waxbaanu ka dhisanay anagaana bilna hadii hal qabiil oo qura ahaan lahayd qiimahaa ma lahaan lahayd. Waxaanse leenahay xoreeya dhulka aad sheeganaysaan ee Sool iyo Sanaag ee idinka la idinka qabsaday ama na daaya adeerayaal.
Maansha alaah puntland
gaalkacyo guul wadlada puntland
Ku dayo puntlan ku dayo puntland
MOORYAAN HABAYAC HAWIYE HABARGIDIR U SHEEGA